Roccat Pyro ongororo: Inodhura michina yemitambo keyboard
June 27, 2021 by Justin26
Pachiso chayo, iyo Roccat Pyro isarudzo inonakidza kune avo vanotsvaga yakasimba, inoonekwa-yakapfuma uye yakasununguka mutambo wemitambo.
Iri 'bhodhi rine mamwe maficha ekutanga - asi kubvisa iwo wakakura mutengo tag. Iyo inozvirumbidza nealuminium backplate, yakatsaurwa midhiya vhoriyamu vhiri, yakaderera-chimiro dhizaini, uye mamwe akanaka kwazvo software-nhanho kutonga.
Inoita sei painotamba uye ichishanda mukati mezuva rese hazvo? Hezvino izvo zvatinoita nezvazvo.
Stylish bhajeti setup
Inogona kutsvuka zororo
Brushed aluminium yepamusoro ndiro
Linear (tsvuku) mechina switch kubva kuTTC
Pakutanga kuona, iyo Roccat Pyro haina kutaridzika kunge yakawanda. Iko hakuna makiyi enhau akazvipira, hapana akanakisa epasi-mapikicha makiyi, hapana mune-yako-kumeso maitiro.
Asi iwe unogona zvakare kuona yayo isinganetsi maitiro. Iyo ine yakanaka chaiyo aluminium backplate iyo isingotarise chete chikamu asi yakagadzirirwa kuti igare yakasimba uye inomira kushandiswa uye kushungurudzwa. Iyo zvakare ine yakasununguka yakaderera-chimiro furemu iyo inogara padyo nepadhesiki uye inovimbisa kuti mawoko ako haana kukombama pamakona asina kunaka apo uchishanda, kubhurawuza kana kutamba.
Yakanakisisa yemitambo kadhibhodi: Yakanakisa yakanyarara, yakakura, ine ruvara uye inodada machina makadhibhodi kutenderera
Zororo remaoko rinobviswa uye kunyangwe rakagadzirwa nemapurasitiki ane matinji neimwe nzira anokwanisa kuve akasununguka kushandisa zuva rese. Kunyangwe isu takaiwana ichiita seguruva nemagineti evhudzi - nenzira imwecheteyo yatakaita setup yakafanana iyo Roccat Magma.
Kune iyo Pryo, Roccat yakasarudza kushandisa TTC tsvuku mutsara mitsetse yemakiyi switch (zvimwe pane izvi muchinguvana). Aya ndiwo maitiro akafanana neCherry MX uye ane zvimiro zvakafanana pabepa. Mukuita, ivo vanonyatsonaka kutaipa uye vakaringana zvakakwana kumitambo zvakare. Ivo vane yakanaka mhinduro uye hwomutambarakede actuation. Zvinotonyanya kukosha, ivo havana ruzha zvakanyanya zvekuti ivo vanonetseka zvekusvotesa vaunoshanda navo kana shamwari dzako dzinogona kuzvinzwa pamusoro peDiscord.
Iyo Pyro inotambawo yakajairwa yepasi mutsara mutsara, zvinoreva kuti ichashanda nemufaro nechero yakasarudzika keycap set inokodzera Cherry MX -style switch. Nezvinangwa zvekuyedza isu takasarudza kushandisa Corsair's Double-Shot Pro keycap mod yakaiswa kuti uone kana kukwidziridzwa kwaizotakura uye kuti kwaitaridzika sei pane iyo keyboard.
Isu takaedza nesarudzo yemakiyi matsvuku kubva kune iyo kit uye iwo akareruka kukwana. Nhau dzakanaka idzo dzimba dzakajeka pane iyo keywitches zvakare inobvumidza mwenje wakakwana kuburikidza nekuvhenekesa-nyore PBT yakapetwa makiyi, kunyangwe hazvo huwedzero hwavanopa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo Pyro haina PBT keycaps seyakajairwa. Iwo mamwe epurasitiki nyaya, iyo inogona kusakara nekufamba kwenguva nekurema uye nekureba kushandiswa.
Isu takacherekedza kuti akajairwa keycaps anotora chidimbu chemunwe girisi hazvo, izvo zvinoita kuti vadzike kutsvedza zvichienzaniswa nePBT idzo. Iwe uri kuwana izvo iwe zvaunobhadhara, zvakadaro, uye sezvo ichi chiri chakanyanya bhajeti-inoshamwaridzika keyboard zvakaoma kunyunyuta. Izvo, zvakadaro, zvakanaka kuva nesarudzo yekukwiridzira kana uchida.
TTC mitsara switch - 45g Inoshandisa Simba, 2.0mm actuation, 4.0mm yakazara kufamba
5 yakagovaniswa midhiya ekudzivirira makiyi
Nyore-Shift bhatani rinodzokorora
Game Mode bhatani
Iyi michina keyboard, saka yakagadzikana kushandisa kana uchitamba mitambo kwemaawa kumagumo nekutenda kune yayo yepasi-dhizaini dhizaini. Iyo Pyro inoshandisa TTC tsvuku mitsetse masisitimu anoshanda mukati me2mm - uye nepo isiri iyo ipfupi daro yatakaona, iri yakanaka bharanzi inonyora zvakanaka.
Zvekutamba pane zvakare Game Mode iyo iwe yaunokwanisa kuisikidza nekudzvanya iyo kiyi yebasa uye scroll scroll kiya bhatani pamwechete. Izvi zvinoremadza iyo Windows key asi zvakare inoita kuti Easy-Shift bhatani.
Nyore-Shift inotsanangurwa naRoccat se "bhatani repi". Muchokwadi zvinonyanya kunakidza kupfuura izvo. Uku ndiko kuiswa mukati Roccat's Swarm software izvo zvinokutendera iwe kuti utorezve akawanda makiyi pane iyo keyboard. Haasi ese makiyi, asi mazhinji awo. Ivo vanogona kudzoreredzwa kuti vaite zvakasiyana siyana asi ivo vanogona zvakare kupihwa yechipiri chiito.
Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuwedzera imwe bhatani bhatani kana chairo chiito - sekutanga Anwendung, kuchinja kuvhenekera, switching DPI uye zvimwe zvakawanda. Wobva wawana chechipiri chiito zvese zvaunoda kuti ubate Caps Lock kiyi, ichipa mukana kune huwandu hwezvinhu. Zvinosuruvarisa, zvisinei, hapana kugona kurekodha nekupa macros.
Iwe unogona zvakare kuronga iyo Roccat Pyro nemaprofiles akasiyana kuti iwe ugone kuchinjisa setup yako zvichienderana nezvauri kuita - ingave iri mitambo yakasiyana, vatambi vakasiyana, kana akasiyana mamiriro ebasa.
AIMO injini yekuvhenekesa
Kujekesa kweiyi kiyi
Mavara mamirioni 16.8
Iyo Roccat Pryo inoshandisa pane kiyi RGB kuvhenekesa neRoccat's AIMO mwenje mwenje. Izvi zvinopa mwenje mwenje unoshanduka zvinoenderana nezvauri kuita. Iyo AIMO sarudzo mukati me software ndeimwe yeakareruka uye anogutsa RGB mwenje sync matekinoroji ataona.
Neimwe nzira iwe unogona kusarudza kubva kusarudzo yemhedzisiro inosanganisira wave, nyoka, yakavhenekerwa zvizere, kurova kwemoyo, kufema, kupera kweFX, ripple FX netsika. Tsika modhi inoita kuti iwe usarudze makiyi senge WASD, miseve, F-makiyi, NUM makiyi, kana makiyi ese. Iwe unogona zvakare kudhonza kana kudzvanya kuti usarudze makiyi aunoda kuratidza uye woisa yakatarwa misoro yemichero uye mhedzisiro yeanenge akazara, kufema kana kurova kwemoyo.
Iyi mwenje haisi chero padhuze padhuze nekushamisa senge pane chimwe chinhu senge iyo Corsair K65 RGB Mini - iyo ine yakaturikidzana mwenje mhedzisiro iyo inogona kuiswa mukati meumwe kune mamwe snazzy anoonekwa. Izvo zvakare hazviwone kutenderedza makiyi sezvainoita pairi iyo Roccat Magma. Zvakadaro, iyo Pyro yakasarudzika musika, kwete kukurira, uye inokwanisa kupenya zvinoshamisa kuburikidza neiyi keycaps.
Yakanakisisa yemitambo kiibhodhi 2021: Iyo yakanakisa mechina uye membrane kiyibhodhi kubva kuLogitech, Razer uye nezvimwe
Roccat Horde AIMO Ongororo
Ongorora: Roccat inonyanya kuve neruvara Kone mbeva inonangana neMMO gamers
Mbeu dzakanakisisa dzemitambo 2020: Iyo yakanaka wired, isina waya uye RGB mbeva dzemitambo yekutenga nhasi
Roccat Kone XP ongororo: Wired kugona
Roccat Vulcan 120 Aimo kuongorora: Cherry-style RGB switches yakarurama
Yakanakisa koni yemitambo yemitambo: Iwo akanakisa mahedhifoni ePS4, PS5, Xbox Series X / S, Xbox One uye Nintendo Shandura
Kudzokorora | Tt eSports MEKA PRO Mechanical Gaming Keyboard